Puntland oo ciidamo dheeri ah geysay deegaanka Tukaraq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo ciidamo dheeri ah geysay deegaanka Tukaraq
June 26, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ciidamo katirsan Puntland oo ka ymid gobolka Karkaar oo gaaray Tukaraq maanta oo Talaado ah. [Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ciidamo dheeri ah u diraysay deegaanka Tukaraq asbuucyadii lasoo dhaafay, taasoo muujineysa u diyaargaroow dagaal.
Asbuucyadii dhawaa ee lasoo dhaafay, ciidamo aad u hubeysan ayaa gaaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool si ay u xoojiyaan ciidamo katirsan Puntland oo halkaas joogay, ilo-wareedyo katirsan dowladda Puntland oo codsaday in aan magacooda la sheegin ayaa u xaqiijiyay warsidaha Puntland Mirror.
Maanta oo Talaado ah, ciidamo aad u hubeysan oo katirsan qeybta ciidamada Puntland ee gobolka Karkaar ayaa gaaray Tukaraq.
Isaga oo ka hadlayay munaasabadii salaada Ciidul Fidriga ee magaalada Garoowe, Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay xoreynta gobolka Sool.
Xaalada Tukaraq ayaa asbuucyadii lasoo dhaafay deganayd, balse dagaalka ayaa ka qarxi kara wakhti kasta.
Ilo-wareedyo sirdoon oo sheegay in hoggaamiyihii Al-Shabaab uu geeriyooday